Inona no tsena lehibe telo amin'ny vokatra tungstène carbide?
nataon'ny admin tamin'ny 20-11-27
Inona no tsena lehibe telo amin'ny vokatra tungstène carbide ankehitriny? Ny kojakoja firaka mafy dia mibodo ny tsenan'ny fiara, ara-pitsaboana, angovo vaovao, mino ve ianao? Fantatrao ve izany? Mba avelao aho hampahafantatra anao anio. Ampiasaina indrindra amin'ny sehatry ny fiara. Taorian'ny famolavolana, sintering, metaly na firaka pow ...
Ny varotra dia nahatratra ny avo indrindra tamin'ny taona 2015
nataon'ny admin tamin'ny 20-11-25
Tamin'ny taona 2015, niatrika ny fitomboan'ny fanerena ara-toekarena sy ny fianjeran'ny vidin'ny akora sy ny anton-javatra ratsy hafa, ny Nanchang Cemented Carbide LLC dia niroso tamin'ny firaisankina, sady tsy nisalasala na namaly ny hafa hikatsaka fampandrosoana. Ho an'ny anatiny, nanatsara ny fitantanana sy ny q...
Nitombo indray ny varotra orinasa manoloana ny fitakiana malemy amin'ny tapany voalohany amin'ity taona ity
Hatramin'ny fiandohan'ny taona 2014, ny vidin'ny akora vita amin'ny tungstène dia nihena hatrany, ny toetry ny tsena dia ao anatin'ny toe-javatra manjavozavo na eo amin'ny tsena anatiny na any ivelany, ny fangatahana dia tena malemy. Toa ao anatin'ny ririnina mangatsiaka ny indostria manontolo. Manoloana ny toe-draharaha goavana eo amin’ny tsena, t...
Politika momba ny harena an-kibon'ny tany
Nanchang Cemented Carbide LLC (NCC) dia iray amin'ireo orinasa lehibe amin'ny saha Tungsten Carbide any Shina. Mifantoka amin'ny fanamboarana ny vokatra Tungstène izahay. Tamin'ny Jolay 2010, ny filoha amerikana Barack Obama dia nanao sonia ny "Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act" izay misy ny fizarana 1502(b) momba ny ...
Fitaovana karbida, Carbide simenitra, Carbide Precision Tools, Milling Cutter, Carbide Tools, Solid Carbide End Mills,